Akasimudza makumbo mudenga beche rainge rakazvimbirira ndisati ndanyudza mboro yangu! - Masasi eHarare
DzeBonde Akasimudza makumbo mudenga beche rainge rakazvimbirira ndisati ndanyudza mboro yangu!
Akasimudza makumbo mudenga beche rainge rakazvimbirira ndisati ndanyudza mboro yangu!
Ndirimubhazi imomo pamberi pangu painge pakagara vamwe vasikana two vairatidza kuti havasi vekumasha but vaitoyenda havo maybe kunoita voluntary work since ndainge ndanzwa kuti kune an NGO yaibatsira chembere ikoko. Mumwe wacho ainge akapfeka blouse rainge rakavhurika 2 buttons epamusoro, mabhazi edu ekumusha unenge uchingobhambiswa mazamu achikandwa mudenga apa ainge akakura ari eround zvainakidza. Ndichikandwa kudaro ndakatanga kuita fantasise colour yebhurugwa rainge akapfeka or kuti ainge ane beche rine choya here kana kuti ayinge akaita clean shave. Pfungwa dzaimhanya dzega kusvikira ndaswedera padhuze navo time yakasimuka mumwe munhu akuburuka.
Road yebhazi yainge yakusafambika ndokubva driver adeedzera kuti vabereki nzira yedu yaperera pano kumberi hakusi kufambika, takanhonga tumukwende twedu tese ndokubva taburuka mubhazi asi tainge tatova hedu padhuze nema shops but taizofamba about 3km kunosvika kumisha nekuchikoro. Vasikana ava vakatanga kufamba inini ndichitevera kumashure kwavo ndokubva vamira uya wemazizamu ndokutora bottle remvura, paainwa ndakabva ndawona pant reblack richibudikira. Akabva angoti ” Do you like bhurugwa rangu” ndazoti chii nhai masasi ndakangoti “Yes” ndokubva ayenderera zvikanzi iii ndakatota right now hausikuda kundinanzva beche rangu here, unopererwa so apa mumwe wacho aiyita kunge asipo akangonyarara.
Ndakayenda naye paseri pemuti ndokubva ndapfugama ndakabatirira magaro ake eround ndokubvisa trouse rake nepant ndichibva ndaisa rurimi rwangu pakati pemakumbo ake ndichinanzva juice dzebche rake and it tasted so sweet. Ndiri pakati kudaro ndichiisa rurimi mubeche akatanga kuita kukoirira face yangu ndikanzwa munhu akuita kuchemerera nekunakirwa. Akawedzera mhere inini ndichikoirira chete apa mawoko angu achitambisa minyatso yake ndikanzwa beche rayita kuzvimbirira. Makumbo ake akatanga kusheka kunge munhu arohwa nemagetsi apa achidhonza musoro wangu achideedzera kuti ndakutunda ndikanzwa mumuromo mangu mazara juice yainge iri thickand sticky, akadonhera pasi makumbo achingosheka for a few seconds before atanga kuseka zvikanzi aaahh handisati ndambotunda zvakadaro before.
Aripasi kudaro akabva avhura zip yebhurugwa rangu ndokubva abata gotsi rake mboro yese yaiswa mumuromo akatanga kukoira apa achitambisa rurimi rwake pamusoro wemboro zvekuti ndaibva ndanzwa kunyerekedzwa muviri wese. Ayipota achiita kunge munhu arikuzvidzipa nemboro, ndikanzwa zvakunzi aaah ndirikuda mboro iyi mukati mebeche rangu undisvire zvakasimba. Akazvambarara pasi achibvisa pant ndokukandira pamuti wainge uripadhuze ndokusimudza makumbo mudenga ndikawona beche rakazvimbirira ndisati ndanyudza mboro yangu mubeche rake rainge riri wet kare. Ndakabairira mboro yangu zvishoma nezvishoma ndokubva ndatanga kusvira slowly ndichiita ndichiwedzera speed, ndichinyudza more and more pese pandaikoira, ndombomira ndodzosera mukati kati.
beche rainge rakazvimbirira